आइजिपी बन्नका लागि कति लाख सम्म बुझाइन्छ यहाँ? खरेललाइ आइजिपी बन्नका कति लाख लागि मागियो त? – TAJA KHAWAR
November 13, 2018 Taja Khawar आलेख/टिप्पणी 0
काठमाडौं – वि.सं २०५३ फागुन १५ मा मोतीलाल बोहोराको पदावधि सकिँदै थियो। अच्युतकृष्ण खरेल र धुर्वबहादुर प्रधान भावी आइजिपीका दाबेदार थिए। खरेललाई आइजिपी बन्नका निम्ति २० लाख रूपैयाँ तयार पार्ने सुझाव आयो।
यो भिडियो हेर्नुहोस के भन्छन रमेशले?
नेपालीमुलका अमेरिकी सांसद ह्यारीको गाउँमा खुसी नै खुसी यसरी मनाए खुसीयाली, हेर्नुहोस